के डोमेन पार्किंग सार्थक छ? | Martech Zone
के डोमेन पार्किंग सार्थक छ?
आइतवार, जनवरी २,, २०१। आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
होईन ... वा हुन सक्दैन। मेरो लागि हैन, जे भए पनि।
डोमेन पार्किंग भनेको के हो? यो जब तपाईं एक डोमेन नाम को लागी एक महान विचार छ, तपाईं यो खरीद छ कि भनेर जाँच गर्नुहोस्। यो होइन ... त्यसैले तपाईं यसलाई किन्नुहोस्। वेबसाईटको लागि डोमेन प्रयोग गर्नुको सट्टा तपाईले यसलाई 'पार्क' गर्नुभयो। डोमेन पार्कि additional भनेको अतिरिक्त आम्दानीको साधन हो र डोमेन नामहरूको केहि ठूला मालिकहरूले यसलाई लाखौं बनाउँछन्। डोमेन पार्कि withको साथ पैसा कमाउने दुई तरिकाहरू छन्:
व्यक्ति कहिलेकाँही टाइप गर्नुहोस् URL बरु यसको खोजी गर्नु भन्दा। यदि तपाईंसँग डोमेन नाम भएको छ भने, तपाईं अवतरण विज्ञापनलाई अवतरण पृष्ठमा राख्न सक्नुहुनेछ। यदि मान्छेले विज्ञापनमा क्लिक गर्दछ भने, तपाइँ विज्ञापनदाता द्वारा भुक्तानी हुनेछ।
व्यक्ति डोमेन नाम चाहान्छन्, त्यसैले उनीहरूले तपाईलाई प्रस्ताव दिन्छन्।
जब म आज एउटा लेख पढ्दै थिएँ, यसले मलाई यो व्यवसायको परीक्षणको बारेमा सम्झना गरायो कि मलाई फेरि रिपोर्ट गर्नुपर्‍यो। एक बर्ष भन्दा अगाडि, मैले व्यापार २.० पत्रिकामा केही साइटहरू पढें जुन डोमेन पार्कि resources स्रोतहरू प्रस्ताव गर्थे। त्यो बेला, Sedo एक डोमेन पार्किंग कम्पनी मध्ये एक थियो कि कुनै अग्रिम शुल्क थियो। मैले ब्लग पोस्ट लेखेको थिएँ कि म यसलाई शट दिनेछु।
डोमेन नाम जुन मसँग राम्रो थियो navyvets.com। डोमेन पार्क गरेको एक बर्ष पछि, मसँग 93 h हिटहरू छन् जसले $ १.२२ बनाएको थियो $ २$०० को बिक्री मूल्यको लागि कुनै प्रस्ताव छैन। किनकि म यस डोमेनको प्रत्येक नविकरणका लागि प्रति वर्ष। १..1.22 pay भुक्तान गर्छु, यो राम्रो क्षति हो।
त्यो मेरो सब भन्दा राम्रो प्रदर्शन लिंक थियो।
अवश्य पनि त्यहाँ वास्तवमा काम गर्ने तरिकाहरू छन्। यदि मसँग हजारौं डोमेन नाम रजिस्ट्राररले पार्क गरेको छ जसले मलाई कम दरहरू प्रस्ताव गरेको छ, म आफैंले विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्‍यो ... सम्भवतः साइटहरूमा सामग्रीहरू केही व्यवहारिक विज्ञापनको साथ राख्दै - म नाफा बदल्न सक्दछु। यदि मैले प्रत्येक नाममा एक डलर कमाए भने, म १०,००,००० नामहरू किन्न सक्छु र राम्रो आय कमाउन सक्छु। तर मसँग त्यो गर्ने समय छैन। साथै, उत्तम नामहरू पहिले नै खरिद भइसकेको छ त्यसैले यसले म्याद समाप्त भएका डोमेनहरूमा पर्खाइ लिन धेरै समय लिन सक्दछ वा अरूले किन्नको लागि प्रयास गर्न धेरै पैसा खर्च गर्न सक्दछ जुन एक बक वा दुई बदल्न सक्दछ।
त्यसो भए, मेरो डोमेन पार्किंग क्यारियर लगभग सकियो। मेरो अन्तिम शट मेरो सर्वश्रेष्ठ डोमेन सेडोमा राख्नुपर्नेछ $ $ for को लागि यो पहिलो पृष्ठमा पाउनको लागि यदि म खरीददार भेट्टाउन सक्छु। म मेरा बचेका डोमेनहरू यस ब्लगमा दर्साउनेछु, जसले यसको विज्ञापनमा सेडो भन्दा बढि क्लिक-थ्रु दर उत्पन्न गर्दछ (click ०.१०) EPC)। म तपाइँलाई थाहा दिन्छु कसरी यो जान्छ!
बाहिर हेर्नुहोस्, यहाँ फ्लेक्स आउँछ!
तपाईंले केहि वास्तविक समस्याहरू औंल्याउनु भएको छ डोमेन पार्कि ”" किनकि यो हाल अवस्थित छ। तपाईंसँग या त केहि उच्च ट्राफिक डोमेनहरू वा संख्या डोमेनहरू हुनु आवश्यक छ जुन आफैले तिर्ने भन्दा अलि राम्रो गर्छ।
अर्कोतर्फ, मेरो केहि डोमेनहरूले उनीहरूको सामग्री र एड्सेन्स विज्ञापनहरू भन्दा नियमित रूपमा पार्क गर्दछन्।
नोभेम्बर,, २०१ at 27::2007 बिहान
डोमेन पार्किंग काम गरिरहेको छैन, यो केवल समयको खेर फालिरहन्छ, जबसम्म तपाईंसँग १००+ २००+ राम्रो डोमेन नभएसम्म, केहि डोमेन रजिष्टर गर्नुहोस् र नाफा प्राप्त गर्न चाहानुहुन्न सपना हो, समय खेर फाल्नुहुन्न।
मई 8, 2008 मा 3: 51 PM
यदि एक डोमेन नाम रेग शुल्क भन्दा अधिक राजस्व उत्पन्न गर्दै छ यो पक्कै यो पार्किंग लायक छ। यस प्रकारको डोमेनको १०० खोज्नुहोस् र तपाईले राम्रो आय आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ
मई 12, 2008 मा 4: 38 एएम
यदि तपाईं डोमेन पार्कि companies कम्पनीहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तिनीहरूले तपाईंको राजस्वको एक हिस्सा लिइरहेका छन्! यदि तपाइँ तपाइँको आफ्नै डोमेन पार्कि script स्क्रिप्ट होस्ट गर्नुहुन्छ (जस्तै कि बाट उपलब्ध) http://www.domainzaar.com ) तपाइँ तपाइँको विज्ञापन राजस्व को १००% राख्नुहुन्छ ... साथै उनीहरु एक नि: शुल्क .COM DOMAIN NAME को प्रमोशन चलिरहेका छन् र मे २०० EX को अन्त्य सम्म नि: शुल्क एक्स्प्रेड DOMAIN फाइन्डर सॉफ्टवेयर। यसलाई जाँच गर्नुहोस्। http://www.domainzaar.com
जुलाई,, २०१ at 22::2008। बिहान
डोमेनझाजरको बारेमा यहाँ टिप्पणी गर्न प्रतिरोध गर्न सक्दैन।
हरे शिव। कस्तो पैसाको बर्बादी। विशेष गरी मेरो पैसा, मेरो १०० डलर।
थोमा - वा जेसुकै उनको नाम हो - ईमेल विनिमय गर्नमा मद्दत पुर्‍याउँथें जब मैले डाउनलोड पछि BUT तिर्ने प्रयास गरिरहेको थियो… .. नमस्ते कोही घर छ ??? धेरै ईमेल दुबै सीधा र तिनीहरूको वेबसाइट सम्पर्क फारम मार्फत। केहि छैन! कुनै जवाफ छैन।
यो स्क्रिप्ट आईएमएचओ १०० को बर्बादी हो।
त्यहाँ निःशुल्क स्क्रिप्टहरू उपलब्ध छन् जुन वास्तवमै काम गर्दछ।
तपाइँको मेहनत कमाएको पैसा बर्बाद नगर्नुहोस् यसलाई डोमेनझायरमा पठाउँदै।
जुलाई १,, २०१ at १::10२ अपराह्न
मैले गत वर्ष डोमेन्जारबाट किनेको, सबैभन्दा ठूलो गल्ती।
मसँग एक सभ्य डोमेन नाम (बेस3.com) थियो र यसमा डोमेनज्जार सफ्टवेयर स्थापना गरें, अर्को हप्ता, कसैले मेरो डीएनएस हाइज्याक गरेको थियो र यसलाई आफ्नो वेबसाइटमा देखाउँदै थियो। DZ ले प्रशासक पासवर्डलाई पठाउन टेक्स्ट फाईलमा पठाउँदछ।
मैले ते प्रोग्रामरलाई यो ठीक गर्न भनेँ, २ महिना कुर्नु पर्‍यो र त्यसपछि यसलाई झारियो।
अब म डोमेन पार्कि up अपको लागि होस्ट गरिएको समाधान प्राप्त गर्न काम गर्दैछु, जुन एक मिनेट वा सो भन्दा भित्र द्रुत रूपमा एक कुञ्जीशब्द5पृष्ठ साइट तैनाथ गर्न सक्दछ, म यसको लागि कसरी चार्ज गर्ने सोच्दै छु, के म% लाई माथिबाट लिन सक्दछु? के मसँग डोमेनहरूको सीमित संख्याको लागि वार्षिक शुल्क छ? के मैले यसलाई डाउनलोड गर्न योग्य उत्पादनको रूपमा राख्न अनुमति दिनुपर्दछ?
यी चीजहरू हुन् जुन म आफैंलाई सोध्न चाहन्छु, कोडर वेब एप्सको साथ परिचित हुँदैछ एपीआईको नेटभर मार्फत उपलब्ध छ, मलाई डिजाइन र मार्केट गर्नु पर्छ।
जुलाई,, २०१ at 31::2008। बिहान
डोमेन जार एक लज्जास्पद, एक फोनि, र कुनैलाई पनि उत्पादन खरीद विचारको लागि गल्ती हो। सफ्टवेयरले वर्णन गरे जस्तै काम गर्दैन र त्यहाँ कुनै समर्थन छैन। यदि तपाईंले $ with with को साथ विभाजन गर्न आपत्ति जनाउनुहुन्छ भने अघि बढ्नुहोस् र यो गर्नुहोस्… तपाईंको उत्पाद राम्रोसँग काम गर्दैन र फेरि जार स्काम मान्छेले कहिले पनि केही सुन्न सक्दैन। घोटाला शहर।
सेप्टेम्बर 13, 2008 मा 7: 00 AM
सबै गलत शानदार शानदार.कट र हिटफार्म.क. प्रयास गर्नुहोस् - उनीहरूको प्रीमियम कार्यक्रमहरू प्राप्त गर्न आवश्यक छ, यद्यपि। केहि वर्ष पहिले सुरू भयो, अब १२,००० / महिना घर बनाउने, २,12,000,००० / मो सकल।
डिसे 16, 2008 मा 6: 08 AM
डोमेन पार्किंग आलसी व्यक्तिहरूको लागि हो जुन तिनीहरूको डोमेन नामहरूको लागि स्वचालित माइक्रोसाइटहरू बनाउन सक्दैनन्। डोमेन पार्किंगको बारे मा यो हो कि तपाइँ केवल तपाइँको सम्भावितताको %०% कमाउन सक्नुहुन्छ र तपाइँ तपाइँको डोमेनहरूको लागि उमेर कारक निर्माण गरिरहनु भएको छैन।
डगलस, यस छलफलका लागि धन्यबाद। एउटा सानो सल्लाह, यदि तपाइँले आपत्ति मान्नुहुन्न: तपाइँको रजिस्ट्रार परिवर्तन गर्नुहोस्। नविकरणका लागि मैले $ to देखि $। भन्दा बढी तिर्ने छैन। $ १..8 way बाटो एकदमै उच्च छ, बाटो पनि धेरै उच्च !!! तपाई सजिलैसँग प्रत्येक डोमेन नाममा $ saving बचत गर्न सक्नुहुनेछ। एक डोमेनको लागि सिमी जस्तो लाग्छ तर यसलाई छिटो हिसाब दिनुहोस् यदि तपाईंले पाउनुभयो भने, १०० वा १००० डोमेन नामहरू ... धेरै डोमेनरहरूले नयाँ कारहरू र लक्जरी बिदा आफ्नो महँगो रेजिस्ट्रारहरूमा फ्याँकदै छन् 🙁
यो डोमेन र डोमेन पार्किंग को बारे मा धेरै हास्यास्पद ब्लग पोष्ट हो जुन मैले लामो समयमा पढेको छु। डोमेन पार्कि itsमा यसको गल्तीहरू छन् र प्रत्येक बर्ष बर्षको साथ चमक गुमाउँदैछ तर वास्तवमै राम्रो जेनेरिक डोमेन नामहरूले अझै पनि उनीहरूका मालिकहरूलाई राम्रो पैसा कमाइरहेका छन् (जुन दिनको १०,००० डलरमा तपाईंको डलरको एक डलरको बेवकूफ उदाहरण भन्दा फरक छ जुन हुनेछ। एउटा ठूलो नोक्सान जब तपाइँ नवीकरण शुल्कमा कारक हुनुहुन्छ।) र तपाइँको राय आधारभूत गर्न डोमेन वाटरमा डब्बलिंग गर्न वास्तवमै खराब डोमेन नामहरूसहित जुन वास्तविक डोमेनरले कहिल्यै एक्लै पार्दैन पार्कको एक्लैले चिन्ता लिने अर्को गल्ती हो। यदि केहि पनि हो, र कुनै पनि डोमेनरले तपाईंलाई भन्दछ, तपाईंसँग मोनेटाइज गर्ने र / वा आफ्नो डोमेनलाई पल्टाउने राम्रो सम्भावना छ। केवल केही खास प्रकारका डोमेन नामहरूले राम्रो गर्न सक्छन् जबकि पार्क र navyvets.com तिनीहरू मध्ये एक हो। स्याउलाई ब्रोकोलीसँग तुलना गर्नुको सट्टा स्याउको तुलना गर्नु राम्रो हो। केवल भन्नुहोस्
वाह - यकिन छैन कि म 'धेरै हास्यास्पद ब्लग पोस्ट' को लागी पुरस्कार पाउन योग्य थिएँ। म तपाईंसँग सहमत छु, वास्तवमा। मैले भर्खर भनेँ यो मेरो लागि होईन र मैले केही समर्थन कागजातहरू आपूर्ति गरें। अन्य व्यक्तिहरूले यसलाई अत्यन्त लाभदायक उद्यमको रूपमा लिन सक्छन् ... केवल मलाई होईन।
डोमेन नाम पार्किंग अवधारणा मद्दत गरीयो म Sedo ..Site को भ्रमण गरिएको छ डोमेन नाम पार्किंग विवरणहरूका लागि ।यो राम्रो छ ।यो पनि साइटमा डोमेन नाम किन्न सक्छ।Tucktai.comर यसलाई बल्क रेजिष्ट्रेसन प्रयोग गरेर बेच्नुहोस्। यू डोमेन साइट पार्कि & र विक्रेताको लागि साइट सिर्जना गर्न सक्दछ तपाई साइटको रिसेलर पनि हुन सक्नुहुनेछ।